3 Siyaabaha Badbaadada iyo Quick in kaabta Samsung Galaxy qod6 / S5
3 Siyaabaha kaabta Samsung Galaxy qod6 Edge / qod6 / S5
Hayso ah Samsung Galaxy qod6? Fursadda in laga yaabo in aad rabto in aad gurmad in ay ka fogaato khasaaraha xog kasta oo marka aad dib warshad, waxaa xidid u mudnaan sare, iftiimiyo ROM ah ama sare loogu phone cusub, sida Google Nexus 6. Wixii idinku dhaca in gurmad Samsung Galaxy qod6 ama S5 , waxa ugu muhiimsan waa sida loo sameeyo. Maqaalkani waxa uu idin tusiyo 3 siyaabood oo loo xiriiro gurmad, barnaamijyadooda, music, video, sawiro iyo ka badan oo ka Samsung Galaxy qod6 / S5.
Habka 1. kaabta Samsung Galaxy qod6 / S5 la kaabta ka App dhisay-
Habka 2. kaabta Samsung Galaxy qod6 / S5 in Computer la Professional kaabta Software
Habka 3. Buur Your Samsung S5 sida Flash Drive in la sameeyo Samsung qod6 / S5 kaabta
Waa in aad ogaadeen in uu jiro waxaa dhisay-app ee kaabta aad Samsung Galaxy qod6 / S5. By isticmaalkiisa, awoodo aad barnaamijyadooda, xiriirada, SMS, MMS, jadwalka taariikhda, abuse gurmad call iyo sawiro ka Samsung Galaxy qod6 / S5 in kaarka SD ay.
Tallaabada 1. aad Samsung Galaxy qod6 / S5, ka jaftaa app ee kaabta.
Tallaabada 2. In qaybta gurmad ah, ka jaftaa Data . In shaashadda soo socda, dooran xogta aad rabto in aad gurmad. Waad ogol yahay in ay xiriir gurmad, SMS, MMS, jadwalka taariikhda, sawirada iyo Guda yeedha. Markaas, ka jaftaa Back up . In wada hadal pop-up ah, qor magaca ah gurmad ah. Haddii kale, gurmad ay la magacaabi doonaa sidii markii aad gurmad. Ugu dambeyntii, ka jaftaa OK . File gurmad ayaa la badbaadin doonaa kaadhka SD aad. Its Jidka badbaadiyo waa Phone \_ ct_backup \_ backup_all
Tallaabada 3. Go back to shaashadda gurmad ugu weyn, ka jaftaa Codsiga qaybta gurmad ah. Dooro barnaamijyadooda aad rabto in gurmad iyo tubbada kor u Back .
Waxaa jira in badan oo Samsung Galaxy S5 gurmad software, dhex Wondershare MobileTrans taagan ay simpleness iyo waxtarka weyn. Software waxa uu ku siinayaa awood ay ku raad raac app, xiriirada, SMS, abuse wac, jadwalka taariikhda, music, video, sawiro ka Samsung Galaxy qod6 / S5 in computer si fudud oo si habsami leh. Iska akhriso tutorial soo socda hoose si aad u hesho fahmaan sida software u shaqeeyo.
Dadka isticmaala Mac, waxaad isku dayi kartaa Wondershare MobileTrans u Mac , taas oo aad ogolaanaysaa barnaamijyadooda gurmad, xiriirada, fariimaha, video, sawiro, jadwalka taariikhda, music iyo Guda call ka Samsung Galaxy qod6 / S5 in ay Mac la click hal.
Tallaabada 1. Isku Your Samsung Galaxy qod6 / S5 in Computer iyo Run MobileTrans
First of dhan, download iyo rakibi MobileTrans on your computer. Connect aad Samsung Galaxy qod6 / S5 in computer iyadoo la isticmaalayo cable USB ah iyo in la hubiyo in lagu ogaan karaa your computer.
Tallaabada 2. Do Samsung Galaxy qod6 / S5 kaabta in PC
In uu furmo suuqa hoose, guji kaabta Your Phone . Suuqa kala gurmad ayaa soo baxa, iyo dhamaan waxyaabaha aad awoodo gurmad. Dooro waxa aad rabto in aad gurmad iyo riix Start Copy si ay u bilaabaan. Inta lagu guda jiro habka gurmad, ma barkinta aad Samsung Galaxy S5.
Mar kasta oo aad rabto in la soo celiyo aad Samsung Galaxy qod6 / S5, waxaad tagi kartaa Soo Celinta ka hayaan si ay u helaan tusmada ka dib.
Habka 3. Buur Your Samsung qod6 / S5 sida Flash Drive Qabto kaabta Samsung qod6 / S5
Sida aad ka arki, music, video, sawiro iyo document files yihiin kuwa badbaadayaa kaarka SD ee Samsung Galaxy qod6 / S5 ah. Thanks to Android nooca furan, waxyaabaha kuwaas oo si fiican u heli karo. Si gurmad ku jira sida, waxaad u baahan tahay ma software laakiin cable USB ah. Read socda hagahan si aad u aragto sida ay u gurmad Samsung S5 in ay PC.
Fiiro gaar ah: Tan iyo Mac ma ogaan karaa Samsung qod6 / S5, aad u baahan tahay si loo soo dajiyo yar freeware ah - Transfer File Android inay kaa caawiyaan inaad dalka buuraha leh Android sida flash on Mac ah. Markaas, raac tallaabooyinka hoose.
Tallaabada 1. qaada cable USB in ay ku xidhmaan aad Samsung qod6 / S5 in computer ah. Your computer ogaadaa doonaa Samsung qod6 / S5 oo ay muujiyaan sida flash ah.
Tallaabada 2. Tag Computer oo heli flash ah. Waxaa fur iyo waxyaabaha kaadhka SD muujiyaan ilaa idinka soo hor jeedda.
Tallaabada 3. By default, music, video iyo sawiro badbaadiyey ee Music, Playlists, Movies, Pictures fayl, fayl u dhiganta, iyo sidoo kale fayl abuuray keligaa. Documents waa inaad halkaas iyaga ka badbaadiyo. Tag fayl kuwaas oo nuqul ka faylasha aad doonayso iyo gurmad ay u your computer.
Articles badan oo ku saabsan kaabta Samsung
3 Siyaabaha kaabta Samsung Galaxy S4
Sida loo kaabta Samsung Galaxy S3
Transfer Xiriirada ka Nokia in Galaxy S3
Tallaabooyinka lagu Root Samsung Galaxy S3
Sida loo xidid Samsung Galaxy S4
> Resource > Samsung > 3 Siyaabaha kaabta Samsung Galaxy S5